Ny telefaona finday Android tsara indrindra: fitsapana, fandefasana, tsaho ... | Androidsis
Te hahafantatra ny zava-drehetra momba ireo finday vaovao tonga amin'ny tsena amin'ny Android ve ianao? Mitady finday vaovao ve ianao ary te hanana vaovao hifidianana tsara kokoa? Eto ianao dia afaka manana fidirana amin'ny fampahalalana rehetra momba ny finday izay mahatratra ny tsena amin'ny Android. Amin'izany dia ho afaka hahafantatra bebe kokoa momba azy ireo amin'ny fomba tena tsotra ianao.
Vaovao, hevitra na famaritana ireo karazana telefaona Android rehetra, avy amin'ireo marika lehibe eny an-tsena, ary koa ireo mpanamboatra vaovao tonga any am-pivarotana. Amin'ity sokajy ity dia ho hitanao izay rehetra tianao ho fantatra momba ireo finday Android ireo. Aza adino ny iray amin'ireo vaovao ireo.
Finday Android inona no vidiana?
Mba hanampiana anao hisafidy ny hoavin'ny findainao, eto ambany ianao dia hahita mpitari-dalana mividy izay ahafahanao misafidy izay mety indrindra amin'ny zavatra ilainao. Iza amin'ireo no tianao?
Finday tsara indrindra amin'ny taona 2018
Top 10 mobiles an'ny 2017
Telefaonina latsaky ny 300 euro
Finday tsara indrindra amin'ny vidin'ny 200 euro
Telefaona sinoa latsaky ny 100 euro
Araka ny mampiavaka azy
Finday tsara indrindra miaraka amin'ny Android One
Telefaona misy fakan-tsary fakan-tsary tsara indrindra
Finday Android amin'ny marika
Raha mazava tsara aminao ny marika amin'ny findainao Android manaraka, amin'ity lisitra manaraka ity dia hahita ny vaovao farany ianao sy ny fandefasana ireo orinasam-pifandraisana Android manan-danja indrindra eto an-tany.
Ireo no mpanamboatra solontena be indrindra raha ny finday Android no resahina. Betsaka ny mpanamboatra, indrindra ny sinoa, saingy amin'ny lafiny iray, ireo no mpivarotra ambony indrindra amin'ireo mpampiasa ny rafi-pitantanana finday Google.
Vaovao misimisy momba ny finday Android
ny DaniPlay hace Andro 5 .
Huawei androany dia nanambara ihany koa ireo smartphone roa vaovao P50. Hisy havana roa ho an'ny ...
ny Aaron Rivas hace Andro 5 .
Xiaomi dia nanangana smartphone vaovao eny an-tsena ho an'ny sehatry ny lalao, ary izy no Poco X3 GT….
Xiaomi dia nanangana fantsona fampisehoana antonony vaovao eny an-tsena, izay tonga toy ny Redmi Note 10T. Atsinanana…
Ny mpanamboatra Azia Realme dia natsangana nandritra ny taona maro ho iray amin'ireo marika manan-danja indrindra, manolotra maodely samihafa amin'ny vidiny ...
Andro lehibe: fifampiraharahana amin'ny finday sy smartwatch izay azonao araraotina ihany
Ny Amazon Prime Day 2021 dia natomboka tamin'ny tolotra mahaliana maro amin'ny teknolojia, automatique an-trano sy an-trano, ankoatry ny maro hafa ...
Ny fitaovana finday sy ny smartwatches dia nitombo lanja teo amin'ny tsena, ny roa amin'ireo vokatra dia ...
Ny OnePlus Nord CE 5G dia nambara tamin'ny Snapdragon 750G ary tena lafo ny vidiny
Nanambara i OnePlus hoe inona ny laharam-pidirany vaovao taorian'ny tsaho maro momba ny fiasa, ...
Raiso ny Poco M3 Pro amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ity fampandrenesana fanombohana ity
Pocophone dia lasa mpanamboatra fitaovana marobe eny an-tsena izay tsy maintsy dinihin'ny ...
Raha mitady telefaona misy fakantsary mahafinaritra ianao dia aza hadino ny Cubot X50
Tselatra finday fakan-tsary farany ambony, ny Cubot X50, no amidy anio….
Cubot X50: ny fakantsary fakantsary fakantsary 64 MP amin'ny vidiny mirary
Zava-dehibe ny fananana fakan-tsary tsara amin'ny findainao anio. Na dia tsy dia toy izany aza ny fakantsary fakan-tsary ...
Ny ZTE Axon 9 Pro dia ofisialy: 6.21-inch AMOLED, Snapdragon 845, Android 8.1 Oreo ary maro hafa
Ny HTC U12 + dia manomboka manana fanavaozana vaovao miaraka amin'ny fanatsarana maro sy CryptoKitties
ZTE Axon 9 Pro famolavolana farany naseho
BQ Aquaris C dia natomboka: fampisehoana HD +, Snapdragon 425, Android 8.1 Oreo ary maro hafa
Voamarina: ZTE dia hanolotra ny Axon 9 amin'ny 30 Aogositra ho avy izao
Sivana ny fandikana voalohany ny Moto P30